Xarunta Waxqabadka Sanadaha Hore | Dugsiga Oakleigh iyo Xarunta Waxqabadka Sanadaha Hore
Kooxda La -talinta Naafada EYSEND
Macluumaadka loogu talagalay Waalidiinta iyo Daryeelayaasha
Qorshaha Waxqabadka Ciyaaraha Premium 2021-22
Qorshaha Waxqabadka Ciyaaraha ee Ciyaaraha 2020-21 Qiimeyn
Xarunta Waxqabadka Sanadaha Hore
Xarunta Waxqabadka Sanadaha Hore (EYIC) waxay siisaa adeegyo kala duwan carruurta laga bilaabo dhalashada illaa da'da sharciga dugsiga ee leh baahiyo waxbarasho oo gaar ah iyo naafonimo kala duwan..
Kooxaha EYIC waxay ku saleysan yihiin goobta Dugsiga Oakleigh iyo Xarunta Qiimaynta Acorn sidoo kale waxay saldhig ku leeyihiin Dugsiga Colindale. Carruurta iyo shaqaaluhu waxay marin buuxa u leeyihiin dhismayaasha ballaaran ee ku yaal labada goobood. Xarunta Waxkaqabashada Sanadaha Hore iyo Dugsiga Oakleigh ayaa si gooni gooni ah loo abaabulay oo carruurta ka hoosaysa EYIC waxay sii aadayaan adeegyo waxbarasho oo aad u tiro badan da'da dugsiga.
EYIC waxay leedahay saddex waaxood, midkastoo buuxisa baahiyaha sanadaha hore carruurta leh baahiyo waxbarasho oo gaar ah iyo naafonimo siyaabo kala duwan.
Fiiri: Shaxda Ururada ee Xarunta Waxqabadka Sanadaha Hore
Xarunta Acorn waxay ku saleysan tahay laba goobood; mid ka mid ah Oakleigh School oo ku yaal Whetstone iyo mid ka tirsan Dugsiga Hoose ee Colindale. Acorn wuxuu hoos yimaadaa maamulka Oakleigh School & Xarunta Waxqabadka Sanadaha Hore. Acorn waxaa ka shaqeeya Kaaliye Madaxa, fasal kasta waxaa jooga macallin fasal ah iyo saddex illaa afar Kaaliyeyaal Taageero Waxbarasho oo ku xiran baahida. Goob kasta waxay bixisaa barkad lagu dabaasho, aag jilicsan oo lagu ciyaaro iyo fursado jawi dareen leh.
Sannadaha Hore ee Barnet SEND Kooxda La -talinta
Laga soo bilaabo Abriil 2021, Kooxda Ka-mid-noqoshada Dugsiga Hore iyo Kooxda Wax-barashada Dugsiga Hore waxay isku biireen si ay u abuuraan hal takhasusle sannadka hore iyo adeegga wax-ka-qabashada, Kooxda La-talinta Sannadaha Hore. Kooxda La -talinta Sannadaha Hore waxay u diraan faragelin carruurta muujineysa xoogaa dib -u -dhac ama dhibaatooyin xagga horumarkooda ah, oo ka yar 5 sano oo ku nool Degmada London ee Barnet.
Waxaan dib u habeyn ku samaynay garoonkii ciyaarta ee iskuulka!
on 21.10.2020 by Steve Ebert / NHS Waqooyiga Bartamaha London CCG